Madagascar - Serasera | Fiaretana haran-dranomasina
Madagascar - Serasera
Fanentanana ara-tsosialy ho an'ny fampiroboroboana ny sehatry ny mpanjono any Madagasikara
Andavadoaka Coast, Madagasikara
Ny fikolokoloana ny 350 km eo amin'ny morontsiraka atsimo-andrefan'i Madagasikara no rafitra fisamboaran-draharahan'ny Grand Recif, izay ahitana vatohara sakana sy haran-dranomandry. Ny rivodoza Andavadoaka dia maneho ny fahasamihafan'ny karazan-trondro sy ny karazan-karazan-javamaniry ary manintona ireo mpanarato sy mihamaro ireo mpizaha tany. Ao amin'ny faritra Velondriake, ny fomba fanjonoana manimba sasany toy ny fanimbana trondro sy ny fampiasana harona tsy ara-dalàna, manohintohina ny fahasalaman'ny haran-dranomasina sy ny jono ary ny fomba iainana eo an-toerana. Noho ny fanatanterahana ny fanidiana ny fanjonoana ho an'ny orita, ny vondrom-piarahamonina dia nametraka fitantanana harena an-dranomasina marobe. Miaraka amin'ireo mpiara-miasa ao an-toerana, ny velondriake any an-toerana dia mitantana ny faritra amorontsiraka (LMMA) dia napetraka ao amin'ny 2006. Na dia mandrara ny fanao fanjonoana manimba aza ny LMMA dia tsy ampy ny fanarahan-dalàna sy ny fampiharana. Ny Komitin'ny Velondriake solontena voafidy avy amin'ireo tanàna 25 mandray anjara dia tompon'andraikitra amin'ny fitantanana sy fampiharana ny lalàna eo an-toerana. Ny mponina eo an-toerana dia miankina amin'ny vatohara ho an'ny sakafo sy ny fiveloman'izy ireo. Miaraka amin'ny vahoaka mihamitombo, ny fahasalamana ho avy amin'ireo loharano ireo dia tena zava-dehibe.
Haran-dranomasina ao Velondriake. Sary © Blue Ventures
Mba hiatrehana ity loza mitatao ity, ny Rare and Blue Ventures dia nanangana hetsika ara-tsosialy ara-tsosialy avy amin'ny 2009 ho 2011 mba hanairana ny saina momba ny fandraràna ny fanjonoana tsy ara-dalàna sy ny fanatsarana ny fanarahan-dalàna. Ireo fampielezan-tsivana sasantsasany dia mampiasa ny marketing sy ny hafatra vaovao mba hahatratrarana ny tanjon'ny tetik'asa.
Ao ambadiky ny hatezerana mirehidrehitra
Fanamarihan-kevitry ny filaham-peo Ny fanentanana ataon'ny Pride dia mikendry ny hanova fahalalana, toe-tsaina ary fitondran-tena amin'ny fampiasana fomba amam-panaon'ny siansa sy ny fomba fanabeazana vaovao. Ireo fampielezan-kevitra dia am-pahombiazana eo amin'ny sehatra eo an-toerana amin'ny alàlan'ny tetikasam-pampandrosoana voalohany, ny fisafidianana karazana sari-tany ary ny fikarohana amim-pitandremana ny vondron'olona kinendry. Rare Fellows, izay mitantana ny fampielezan-kevitra, dia manaraka ny modely "teoria momba ny fiovana" ho an'ny tetikasa izay mifanaraka amin'ny vondron'olona kinendry. Ity modely ity dia mamaritra ny tombontsoa sy ny sakana amin'ny fihetsika maharitra. Ny ampahany betsaka amin'ny tetikasa dia mitranga am-piandohana amin'ny fizotran'ny fanombanana ny toerana. Miara-miasa akaiky amin'ny vondrom-piarahamonina ny mpiasam-panjakana ao an-toerana manangona ny fampahalalana fototra amin'ny alalan'ny atrikasa sy ny fanadihadiana. Manampy amin'ny famolavolana tetikasam-piarahamonina iray manokana izany ary mametraka tanjona voafaritra tsara ho an'ny tetikasa.
Teoria momba ny fanovana modely. Sary © Rare
Ny hetsi-panoherana sasantsasany dia mametraka tanjona amin'ny fiarovana amin'ny tetikasany. Ho fampiroboroboana ny fitantanana ny orinasam-piarovana Andavadoaka, ny tanjona dia ny hampitombo ny biomass trondro, ny fahasamihafan'ny trondro ary ny CPUE (fisamborana tsirairay) avy amin'ny tranokala ka hatramin'ny 5% ny soatoavina avy amin'ny toerana fanaraha-maso amin'ny fampiasana fomba fanao mahazatra ary ny fanarahana fitsipiky ny LMMA. Ny fanentanana dia mikendry ny hanova ny toe-tsaina eo an-toerana momba ny andraikitry ny fiaraha-monina amin'ny fampiharana ny fitsipika ary ny fanentanana momba ny fomba fanjonoana tsy azo ivalozana toy ny fampiasana harato kely sy fanjonoana poizina izay mamono trondro tanora ary manimba ny toeram-ponenana an-dranomasina. Ny mpihaino dia mpitarika eo an-toerana, tompon-tsambo, mpitaingina lolo, ary ireo vondrom-piarahamonina miaina amoron-dranomasina. Ny fampielezan-kevitra dia novolavolaina miaraka amin'i Rare sy ny mpiara-monina aminy izay mandray fiofanana mialoha ny fampielezan-kevitra ary manohy ny fanohanana mandritra ny fampielezan-kevitra avy amin'ny mpanara-maso mavitrika.
Mba hahatakarana bebe kokoa ny olana, ny mpiasan'ny Blue Ventures teo an-toerana, tarihin'ny Rare Fellow Gildas Andriamalala, dia nanao fivoriana maromaro momba ny vondrona ary fifanakalozan-kevitra amin'ny mpanjono. Ny fanadihadiana mialoha ny fanentanana (jereo ny fizarana amin'ny loharanom-baovao) dia natao ihany koa mba hanangonana ny fahalalana fototra momba ny fahalalan'ny fiaraha-monina, ny toe-tsaina, ny fisainana momba ny fampiasana ny zavaboary an-dranomasina sy ny lalànan'ny sambo eo an-toerana ary ny sakana mpihaino ho amin'ny fiovan'ny fitondran-tena. Nangonina ihany koa ny vaovao mba hamaritra ny karazana fifandraisana izay mety hahomby amin'ny fiarahamonina.
Nisy fitaovam-pifandraisana maromaro nampiasaina, anisan'izany ny hafatra tao amin'ny radio, sora-baventy, afisy, t-shirts, ary ny hetsika toy ny fety. Vezo Aho, "Vezo aho" dia hafatra tsotra sy fototry ny fanentanana, izay mankalaza ny fijerin'ny mpanjono eo an-toerana ho mpitantana ny ranomasina miaraka amin'ireo fahaiza-manao sy fahalalana manan-danja. Ny lohatenin'ny fampielezan-kevitra dia ny "hampitsahatra ny filalaovana tora-pasika sy ny fanjonoana poizina ao amin'ny faritr'i Velondriake", ary ny onjam-peo dia "ny ranomasina no lovako sy ny taranako." Mba hahatongavana amin'ireo mpanarato sy ireo mpikambana ao an-toerana, any amoron-dranomasina. The Vezo Aho Sary maromaro nosoratana tamin'ny sambo 150 maromaro tao amin'ny pirogues ao an-toerana (lakandranon'i dugout) dia toy ny peta-drindrina mandehandeha mba hampielezana ny hafatra momba ny fanjonoana tsy azo antenaina ary inona no azo atao mba hampihenana ity loza ity. Ireo sehatry ny radio dia nampiseho ireo mpanjono teo an-toerana izay namaritra ny maha-zava-dehibe ny loharanon-dranomasina ho an'ny fivelomany. Nofaranana ihany koa ny t-shirts 900 sy 600 hafa.
Sarin'ireo fampielezankevitra natao tamin'ny boaty teny an-toerana. Sary © Blue Ventures
Ny hetsi-panoherana marevaka dia manatontosa teknika fanaraha-maso amin'ny tetikasa izay mifototra amin'ny karazana fampahalalana ilaina amin'ny fanombanana ny tanjona eo amin'ny tranokala tsirairay sy amin'ny famerana ny fetra. Tranga telo no nangonina:
Data ara-tontolo iainana, manome ny angona fototra momba ny haran-dranomasina sy ny angona avy amin'ny tetikasam-pampandrosoana;
Endri-tsoratra proxy, ohatra, mampiasa fampiharana ho fepetra hampihena ny fandrahonan'ny loharanon-karena;
Fanadihadiana ara-tsosialy, mba handrefesana ny fiovan'ny fahalalana, ny toe-tsaina ary ny fitondran-tenan'ny tenany manokana. Nisy fanadihadiana taorian'ny fampielezan-kevitra nampiasa fitaovana fanadihadiana toy ny fanadihadiana mialoha ny fampielezan-kevitra dia nampiasaina mba handrefesana ny hafatra miteraka, ny fiovan'ny fahalalana, ny toe-tsaina ary ny fihetsika.
Taorian'ny herintaona nanatanterahana ny fampielezan-kevitra, dia hita ny valiny:
Fahalalana bebe kokoa momba ny lalàna eo an-toerana eo amin'ny mpitarika sy ny mpanjono
Toe-tsaina tsara momba ny lalàna eo an-toerana eo amin'ireo mpitarika sy mpanjono
Mihamitombo ny fampiharana ny lalàna eo an-toerana
Mihabetsaka ny fampiasana ny fomba fanjonoana manimba
Octopus manga (Octopus cyanea) fijinjana. Sary © Blue Ventures
Amin'ny ankapobeny, ny fanombanana ny fanentanana dia nahitana fa ny fitaovam-pambolena ara-tsosialy dia nitarika fihetsika maharitra teo amin'ny fiarahamonina mpanjono. Raha ampifandraisina amin'ny paikady momba ny fitantanana sy ny fampiharana, dia manampy amin'ny fampivoarana ny fitondran-tena maharitra sy hampihena ny fanao fanjonoana manimba ny fampielezan-kevitra. Ny matanjaka tsy manam-pinoana dia mino fa ny hafatra nokaramain'ny mpihaino iray dia nanakiana ny fahombiazan'ilay fanentanana. Ny lesona azo avy amin'ny fampielezan-kevitra dia mbola ampiasaina mba hitarihana ny hetsika mifandraika amin'ny LMMA.
Maro ireo mpihaino lasibatra no nahatonga ilay fampielezan-kery ho sarotra ny hitantana
Ny tsy fahampian'ny adihevitra momba ny fiovan'ny fihetsika amin'ny fisian'ny mpanjono mpifindra monina dia tsy fahampian'ny fanentanana. Tsy sarotra ny nampifanaraka ny filàn'ny fomba fanjonoana hafa sy ny fivelomana noho ny antony ara-bola sy ara-logistika.
Ireo tompon-tsambo Pirogue dia tsy voatokana manokana amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny hafatra tsirairay. Fotoana iray tsy nahitam-bokatra izay nahafahan'izy ireo nampiasa bebe kokoa ny fanapaha-kevitry ny fanapaha-keviny sy ny andraikitry ny fahaiza-mitarika ara-kolontsaina ho toy ny mpilatsaka ho fidiana.
Ireo tompon'andraikitry ny governemanta dia tsy tafiditra ao anatin'ny fanentanana. Ity fotoana tsy nahitana ity dia mety ho nitarika fanohanana ara-panjakana kokoa ho an'ny fampiharana ny lalàna eo an-toerana.
Ny faritra manodidina ny faritra Velondriake dia nandray anjara tamin'ny vidin'ny fanentanana goavana. Ny toetra niparitaka tamin'ny vohikala 25 dia nahatonga ny vidin'ny fitaterana.
Ny hetsika Pride dia nahomby tamin'ny fananganana fahaiza-manao tamin'ny Blue Ventures sy ny mpikambana Komitin'ny Velondriake. Ny fanandramana ny tetikady ara-barotra sosialy mahavariana sy ny fampiharana azy eny an-kianja, miaraka amin'ny tari-dalan'ny mpanolotsaina iray momba ny fanentanana, dia revolisionera. Ny ekipan'ny ekipa Blue Ventures dia efa voaofana amin'ny fomba ara-tsosialy ara-tsosialy.
Ny fampidirana ireo mpikambana ao amin'ny vondrona avy amin'ny fandrindrana ho an'ny fampiharana dia ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny tetikady fampandrenesana.
Ny fanentanana ara-tsosialy ara-tsosialy napetraka tao Velondriake dia azo havaozina amin'ny toerana hafa any amin'ny morontsiraka andrefan'i Madagasikara noho ny fitovian'ny mpanjono.
Ny fandaniana mivantana hanatanterahana ny hetsika dia $ 40,000 US izay novolavolain'ny Blue Ventures sy Rare.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoRare
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBlue Ventures
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoRare's Ny fitsipiky ny avonavonamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampiasana ara-tsosialy mba hamporisihana ny fitondran-tena maharitra amin'ny fambolena malaza any amin'ny faritra atsimo andrefan'i Madagasikara
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanadihadiana mialoha ny fampielezan-kevitramanokatra fisie PDF